Patent cusub oo sharraxaya sida loo xakameeyo AirPods. | Waxaan ka socdaa mac
Patent cusub ayaa hadda la siiyay Apple Xakamaynta AirPods oo leh qaybo kala duwan oo jidhka ah. Waxayna u badan tahay in goor dhow ama goor dambe ay run noqon doonto.
Si fudud maxaa yeelay waxaa jira waqtiyo aadan lahadli karin Siri si aad mugga kor ugu qaaddo ama aad hoos ugu dhigto, ama aad u bedesho heesaha. Iyadoo tilmaam sida taabasho wejigaaga, ama la sheekaysiga ilkahaaga waxaad amar u diri kartaa AirPods-kaaga. Ma arko wax waalan.
Tilmaansan ayaa cusub ogaaday Patent la siiyay Apple baddii xiisaha lahayd. Waxaa cinwaan looga dhigay "Baadhitaanka Waxyaabaha Jirka Loogu Kiciyo Qalabka Maqalka La Qaadan Karo," waxayna sharraxaysaa nooc cusub oo dareemayaal ah oo loogu talagalay lammaanaha mustaqbalka ee AirPods Pro oo u oggolaanaya barnaamijka taleefanka taleefanka inuu fasiro astaamo gaar ah sida taabashada wejiga ama sheekeysiga. ilkaha si loo xakameeyo aaladda aamusnaan.
Mararka qaar, isticmaaleyaashu waxay sameyn karaan waxqabadyo talooyin ah iyagoo la falgalaya qaabdhismeedka qalabka maqalka la qaadan karo lagu diyaariyo (sida jirka bini'aadamka) Dhaqdhaqaaqa qayb jirka ka mid ah, ama dhawaaq gudaha ah oo ka yimaada jirka bini'aadamka, si loo xakameeyo AirPods.
Mid ka mid ah sawirada patent-ka ah ee lagu soo daray waxay muujineysaa qalab maqal oo la qaadan karo oo u eg qaab mustaqbalka ah AirPods Pro la geliyey dhegta isticmaale. Mid kale wuxuu sawirayaa adeegsade AirPods oo taabanaya wejigiisa si loo xakameeyo mugga samaacadaha.
Qorsheynta laga soo qaatay rukhsadda ay xareysay Apple.
Un makarafoon diirada saaray isticmaalaha, waxay ogaan laheyd calaamada austicic ee ku faafta jirka bini'aadamka marka ficil galinta la sameeyo sida taabashada wajiga, tusaale ahaan.
Isticmaaluhu wuxuu la xiriiri karaa dusha sare ee jirkiisa, sida maqaarka midkiisa cara. Tusaalooyinka kale ee waxqabadyada wax soo gelinta waxaa ka mid ah isticmaale ku sheekaysanaya ilkahooda ama riixaya carrabkooda. Falalka galinta waxaa ka mid noqon kara isticmaale dhaqaaqa qayb jirka ka mid ah, sida dhaqaajinta (ruxida) madaxa, dhaqaaqa gacmaha, gacmaha, lugaha, iwm.
Sida had iyo jeer markaan ka faalooneyno patent-ka, waa in la dhahaa shirkado waaweyn ayaa meesha jooga miles shatiyada sanadkiiba, badankoodna waligood miro dhal ma noqon. Waxay leeyihiin qiimo aad u hooseeya oo lagu abaalmarinayo patent, marar badanna waxay sameeyaan "haddiiba ay dhacdo" xitaa iyagoo og in bilawga aan loo badali doonin xaqiiqo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Mustaqbalka AirPods waxaa lagu xakameyn karaa qeybaha kala duwan ee jirka